Any iPhone or Android Developer in our forum - MYSTERY ZILLION
Any iPhone or Android Developer in our forum
September 2010 edited March 2011 in Member ဆိုင်ရာ
Forum Member တွေထဲမှာ iPhone Development လုပ်နေတဲ့သူ လေ့လာနေတဲ့သူတွေများရှိသလားမသိဘူး။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ iPhone Development စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ကော ရှိပါသလား။ iPhone Development နဲ့ Android Development ဘယ်ဟာကို ပိုစိတ်ဝင်စားလဲမသိဘူး။
iPhone Devlopment ကိုအလွန်စိတ်၀င်စားပါသည်။ဒါပေမယ့်ဘယ်ကစလေ့လာရမယ်မှန်းမသိဘူး။Xcocde ကိုကျွမ်းကျင်စွာကို်င်နိုင်ဖို့ Objective C နားလည်ဖို့လိုတာတော့တသိပါတယ် ။
iPhone နဲ့ Android မှာတော့ iPhone ကိုဘဲစိတ်၀င်စားပါတယ်ခင်ဗျာ။
is it difficult to learn c language?
Do u have Mac , bro ?
if you are interested in kinda iphone dev, please email to
I want to learn about iphone dev.
But i have no Mac.
apple က သူ့ policy ကို ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Mac မရှိပဲနဲ့လည်း ရေးလို့ရလာနိုင်တယ်။ အခုတော့ Adobe CS5 က flash CS5 နဲ့ iphone app တွေရေးလို့ရနေပါပြီ။
i have mac book but i don't know about Objective C. It's easy to learn?
Mac တော့မရှိဘူး Bro မောင်ပြုံး.iPhone Dev ကိုတော့ အရမ်းစိတ်၀င်စားတယ်။
ကျွန်တော့်ကို Linux မှာ iPhone SDK တင်နည်းလေး မစပါအုန်းဗျာ။ ကျွန်တော်က အခု Ubuntu သုံးနေတာ။ ကျွန်တော် http://www.iphone.org.hk/cgi-bin/ch/topic_show.cgi?id=9359&h=1&bpg=1&age=0 ဒီဆိုက်က ဖတ်ပြီးတော့ လုပ်ထားတာလေးလဲ မှန်မမှန်သိချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် iPhone Tool Chain လေး ကို တခြား FTP ဆိုက်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခုကနေ sharing ပေးနိုင်ရင် လေ့လာတဲ့ သူတွေအတွက် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီနှစ်ဖိုင် ဒေါင်းရင်း ရွာကိုလည်နေတာပဲ။ ဟီး အကို ကူညီနိုင်ရင် ကူညီပါအုန်းဗျာ။
zyrum wrote: »
try to learn here
it's easy to learn if you know C++ or other basic programming language.
nasper wrote: »
Linux မှာ ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကတော့ မသိပါဘူး။ အဓိက Mac မှာပဲ ရေးကြတာများတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အချို့ SDK framework တွေနဲ့တော့ windows မှာ ရေးခွင့်ရှိသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် native လောက်တော့ powerful မဖြစ်ဘူးပေါ့။ Linux မှာကတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါ။
စိတ်၀င်စားရုံတင် မကဘူး အဲဒါကို ဒီမှာ ရေးပြီး ရောင်းစားနေတဲ့ သူတွေ တောင်ရှိပါတယ် . ငယ်လဲငယ်ကြသေးတယ် ချာတိတ်တွေ ရေးနေတာ . သူတို့ကို ခိုင်းတဲ့ သူ က တော့ ကိုရီးယားက projdect တွေ ယူရေးတဲ့ သူတွေ ပါ . နာမည်တော့ မပြောတော့ဘူး mict ထဲက ဆိုရင် သိကြမယ်ထင်ပါတယ် .
yea.acompany from Korea, namely, Gokiri (http://gokiri.com/)
I know them well. they made an event. and
announced for the jobs vacancy. ( http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php/8602-Need-a-Software-Developer ) .
I think they are just start-up
Objective C ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခင်ဗျာ။မသိလို ့ပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစေတန်ရှင်းပြထားတာကိုမတွေ ့လိုက်လို ့ပါ။အခုတွေ ့ပါပြီ။
andriod အကြောင်းလေးတွေလည်းရေးပါဦးဗျ။ကျွှန်တော်က andriod ကိုလည်းစိတ်၀င်စားတယ်။
ဘယ်လိုရေးရမလဲ ကိုစေတန်။ link လေးရှိရင် share ပါဦး။
iOS နဲ့ android မှာ အခုထိတော့ iOS ကသာသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Android က open source ဆိုတော့ အုပ်စုပိုတောင့်တယ်။
zither wrote: »
ကျွန်တော်ကတော့ Android ကို ပိုစိတ်၀င်စားပါတယ်။ ဘာလို ့လဲဆိုတော့ iOS ဆိုရင် Apple ကထုတ်တဲ့ဟာတွေမှာပဲ run နိုင်မှာပါ။ Android ကတော့ Samsung, Sony Ericsson, HTC စသည်ဖြင့် သုံးတဲ့ company များပါတယ်။ ဒါကြောင့် Android app ကို၀ယ်တဲ့လူက ပိုများနိုင်တယ်လို ့ထင်လို ့ပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့အမြင်ပါ။
Htet Naing wrote: »
ဟုတ်ပါတယ်။စျေးနူန်းလဲသင့်တင့်ပြီးသုံးရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကလဲသေးသေးလေးတွေနဲ ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလဲကောင်းမွန်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်andriod ကပိုသာမယ်ထင်တယ်။
Open source has big background. Xd Lol